आज कात्तिक १३ गते: कुन राशीका लागि शुभ, कुनलाई अशुभ? - Dainik Online Dainik Online
आज कात्तिक १३ गते: कुन राशीका लागि शुभ, कुनलाई अशुभ?
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७८, शनिबार ७ : २२
पन्चाङ्गः कात्तिक महिनाको १३ गते शनिबार। कात्तिक कृष्णपक्ष नवमी तिथि। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अश्लेषा नक्षत्र शुक्ल योग रहेको छ। सूर्योदय विहान ६ः२४ र सूर्यास्त ५ः२२ मा हुनेछ।
शनिबारको राहुकाल बिहान ९ः०१ देखि १०ः२५ सम्म छ। बिहान ११ः२६ देखि १२ः१० सम्म अभिजित मुर्हूत छ। हरेक दिन अभिजित मुहूर्त हुन्छ। यसलाई शास्त्रमा शुभमुहूर्त मानिन्छ।
अध्यात्मप्रति आस्था राख्नेले गर्ने शुभकर्मका लागि अभिजित मुहूर्तको समयका कर्म गर्ने गर्छन्। आजका देवता पार्वती र ग्रहदेव चन्द्र हुन। राहूकाल भएको समयमा पनि शुभ कर्म नगर्नुहोला।
मेष राशि हुनेका लागि मनमा अशान्त र निराशा उत्पन्न हुनसक्छ । पारिवारिक समस्याका कारणले मनमा चिन्ता र असन्तुष्टि हुनेछ । आजको दिन कसैसँग विवाद र झगडा हुनसक्छ । त्यसैले मनमा चिन्ता नराखी आफ्नो नियमित कामबाहेक नयाँ काम नगर्नुहोला ।
तपाईँले आजको दिन विगतमा गरेको कामबाट धनलाभ हुनेछ । नयाँ वस्त्र प्राप्त हुने योग छ । स्वास्थ्यमा समस्या छ भने पनि विस्तारै सुधार हुँदै जानेछ। पराक्रम गर्ने शक्ति प्राप्त हुनेछ । यदि आजको दिन यात्रा गर्नुहुनेछ भने मनमा शान्ति प्राप्त हुनेछ । बिहान सूर्योदयको दर्शन गर्नु उत्तम हुनेछ ।
मानसिक असन्तुष्टि बढ्ने छ। मनमा चिन्ता भय पनि वृश्चिक राशिका व्यक्तिले शनिबारको दिन नयाँ कामको शुरुवात नगर्नुहोला। आजको दिन नयाँ कामको थालनी गर्दा सफलता प्राप्त नहुनसक्छ। काममा दत्तचित्र भएर लागेका सफलता हात पर्नसक्छ । योजनामुताविक काम भएन भनेर निराशा हुनु पर्छ । शनिबारको दिन सूर्योदयलाई जल अर्पण गर्दा सोच अनुसार काम बन्नेछ ।
मनमा अशान्त, यात्राबाट निराशाजनक फल प्राप्त हुनेछ । मीन राशी हुनेले उत्तरतर्फको यात्रा गर्दा मनमा शान्ति हुनेछ । शनिबारका दिन घरबाट बाहिर जानुपर्दा उत्तरमुख भएर निस्कनु होला । किनकि चन्द्रमा कर्कट राशिमा भएको बेला उत्तर दिशाको यात्रा गर्दा मीन राशी हुनेका लागि शुभ हुन्छ।
प्रस्तुती-चिरञ्जीवी भारद्वाज/न्युज कारखाना